Ụlọ elu okporo ụzọ dị elu nke China dị elu, High Speed ​​Door Motor, High Speed ​​Door Servo Motor Supplier
Nkọwa:Ogige Dị Elu Ọnụ Ụzọ Mgbaba na Nchekwa,Elu Ọnụ Ụzọ Ngwá Agha,Ụlọ Elu Ọnụ Ahịa Servo Motor,Mgbanwe-Mgbochi Mgbochi Oge,,
Home > Ngwaahịa > Ọnụ ụzọ Ngwa > Ogige Dị Elu Ọnụ Ụzọ Mgbaba na Nchekwa
Ngwaahịa nke Ogige Dị Elu Ọnụ Ụzọ Mgbaba na Nchekwa , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ogige Dị Elu Ọnụ Ụzọ Mgbaba na Nchekwa , Elu Ọnụ Ụzọ Ngwá Agha suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ụlọ Elu Ọnụ Ahịa Servo Motor R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ogwe Mgbochi Mkpụrụ Obi na Nchekwa maka Oghere Na-akpaghị aka  Kpọtụrụ ugbu a
Hoto akpaaka akpa nkuku na igbe  Kpọtụrụ ugbu a
Ogweaka akpaaka Servo Motor and Control Box  Kpọtụrụ ugbu a
Ogwe Mkpụrụ Obi na Nchekwa  Kpọtụrụ ugbu a
Onu ogwe aka 50HZ-60HZ Ogwe Mkpụrụ Mkpụrụ na Nchekwa  Kpọtụrụ ugbu a
50HZ-60HZ Ogwe Mkpụrụ Mkpụrụ Control na Nchekwa Maka Ụlọ  Kpọtụrụ ugbu a
Igbe Nchekwa Ọnụ Ụzọ Na-akpaaka na Servo Motor  Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-achịkwa ya na Obere ụgbọala  Kpọtụrụ ugbu a
Oghere akpaaka Servo Motor  Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ Ụzọ Ákwà 50HZ-60HZ Na-ebu Mgbochi  Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ Ọdịdị Dị Elu 50HZ-60HZ Servo Motor  Kpọtụrụ ugbu a
220V 50Hz Ọnụ ụzọ na-eme ngwa ngwa SEJ Motor / High Speed ​​Operator  Kpọtụrụ ugbu a
Atọ ndị na-eme ihe nkiri na-agba agba agba / High Speed ​​Roller Door Germany SEW Motor  Kpọtụrụ ugbu a
220V 50Hz / 60Hz IP65 High Speed ​​Door Servo System Motor and Servo Controller  Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ụzọ dị elu 50HZ-60HZ Mgbanwe ugboro ugboro Servo Motor  Kpọtụrụ ugbu a
Onu ogwe aka 50HZ-60HZ Ogwe Mkpụrụ Mkpụrụ na Nchekwa 1. Nchọpụta: usoro ahụ jiri njikwa na-emechi emechi machibido ma ọ bụ imepụta ihe abụọ, nke a bụ iji hụ ogologo ndụ na-arụ ọrụ ma gbochie ntụgharị n'oge ọrụ 2.Akwuputa: usoro eji ejiji...
Oghere akpaaka Servo Motor 1. Nchọpụta: usoro ahụ jiri njikwa na-emechi emechi machibido ma ọ bụ imepụta ihe abụọ, nke a bụ iji hụ ogologo ndụ na-arụ ọrụ ma gbochie ntụgharị n'oge ọrụ 2.Akwuputa: usoro eji ejiji mejuputa atumatu ya, iji mee ka...
Ọnụ ụzọ dị elu 50HZ-60HZ Mgbanwe ugboro ugboro Servo Motor 1. Nchọpụta: usoro ahụ jiri njikwa na-emechi emechi machibido ma ọ bụ imepụta ihe abụọ, nke a bụ iji hụ ogologo ndụ na-arụ ọrụ ma gbochie ntụgharị n'oge ọrụ 2.Akwuputa: usoro eji ejiji...
Ọnụ ụzọ dị elu 50HZ-60HZ Mgbanwe ugboro ugboro Servo Motor 1. Nkọwa: systerm na-eji njikwa na-emechi emechi machibido ma ọ bụ imepụta ihe abụọ, nke a bụ iji hụ ogologo oge ị na-arụ ọrụ ma gbochie ntụgharị n'oge ọrụ 2.Stability: systerm utilizes...
220V 50Hz / 60Hz IP65 High Speed ​​Door Servo System Motor and Servo Controller (PE200B) ọhụrụ ụzọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ma na-achịkwa usoro ntuziaka Ntuziaka: nkenke the systerm use full closed-loop servo control and double encoder design ,this is to...
Ọnụ Ọdịdị Dị Elu 50HZ-60HZ Ozi ntanetị nke ugboro ugboro bụ Servo Motor bụ: 1. Nkọwa: systerm na-eji njikwa na-emechi emechi machibido ma ọ bụ imepụta ihe abụọ, nke a bụ iji hụ ogologo oge ị na-arụ ọrụ ma gbochie ntụgharị n'oge ọrụ 2.Stability:...
China Ogige Dị Elu Ọnụ Ụzọ Mgbaba na Nchekwa Ngwa
Ụlọ ọrụ anyị nwere German SEW Motor, Japan Mitsubishi Controller. Onye nke anyị na-ahụ maka ụgbọ okporo ígwè Hofic. Onye a ma ama bụ SEJ motor na Holip.
Banyere anyị SEW Motor na Japan Mitsubishi Controller: Ọ dị mfe ịchọta ezigbo ọkpọ ume maka ngwa gị na SEW. Usoro ahụ nwere ihe nkwekọ kwesịrị ekwesị dị na ya maka ọkwa nke arụmọrụ zuru ụwa ọnụ. Họta ike na ugboro ole n'ime mpempe moto a ma ịmeelarịrị nlekọta nhọrọ nhọrọ kachasị mkpa. Echiche zuru ezu nke braking na nke kachasị mma-arụ ọrụ na-emecha jikọta ụgbọ elu. Echiche zuru ezu nke braking na ngwakọta ntụgharị ruo atọ nkedo dị iche iche maka oke mpempe akwụkwọ dị iche iche: Ejiri ihe kachasị mma na-agbanye n'ime igwe. Motors maka klas IE1 ruo IE4.Compact imewe na-azọpụta ohere na ụgwọ. Ihe ga-eme n'ọdịnihu, nakwa maka nchedo gburugburu ebe obibi (ụkpụrụ). Mbelata na arụ ọrụ na-akwụ ụgwọ mgbe ị na-eji ígwè ọrụ nke ọma; ezi igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma.
Banyere akwa akwa ọnụ ụzọ Door System Control: Ọnụ ụzọ ntinye ọnụ ụzọ anyị na-arụ ọrụ na-adaba maka nnukwu ọsọ na ọfụma dị elu na ọnụ ụzọ ntụgharị ike. Usoro dum dị na obere ngwugwu ọkụ, ọ nwere nnukwu elekere na nnukwu ọsọ ọsọ, mkpọtụ ụda, ntụkwasị obi siri ike, nke dị nro na nke dị nro, ọ dị mma maka ebe dị elu na ebe ojiji. Enwere ike ichikota ákwà mgbochi ahụ, bọtịnụ push, Bluetooth, radar ground, sensọ magnetic ala. Speed ​​Speed: 1M / s; Ịgba Oke: <16 Gbasa; Oge a na-arụ ọrụ kwa ụbọchị:> 2000 oge; Igwe volta nke a: 220v; Ihe eji emepụta: 0.75 KW / 1.5KW.
Usoro nwere ike ịrụ ọrụ site na: 1) igbe nchịkwa; 2) inching kọmputa; 3) na-aga n'ihu n'ịrụ ọrụ ọrụ; 4) nkwụsị mberede; 5) akpa otu igbe ọrụ; 6) oge igbu oge; 7) ala radar na / ma ọ bụ sensọ magnetik. Biko jaa aka na Wiring Terminal maka njikọ ebighi ebi.
Usoro nwere nchekwa fusi / nchekwa waya maka mmechi nchedo nke okpukpu atọ, waya fuse / nchekwa maka nchebe circuit, na ọnọdụ okpomọkụ na-achọgharị ọsọ agba maka nchedo moto.
Onye na-akpata ọnyá na-eji ezigbo ọnụọgụ koodu. Jikọta ọnụọgụ ihe zuru ezu na onye na-ebelata site na axodị, ma dozie nku na onye na-ebelata ihe, karịa itinye ntinye ụgbọelu n'ime nkwụnye ihe nkwụnye.
Nkedo na-arịwanye elu maka igbe nchịkwa aghaghị inyocha mgbe nile iji gbochie nkedo na-apụ ma daa. Lelee anya ime na mpụga. Lelee ma gbanwee mmanụ maka redactor na mgbe niile.
Nkọwa: Usoro a ji ejiri njikwa na-emechi emechi na njikwa ihe ntinye. Nke a bụ iji hụ ogologo oge ị na-arụ ọrụ ma gbochie ntụgharị n'oge ọrụ.
Ịnọgidesi ike: Usoro ahụ ji arụ ọrụ arụmọrụ, iji mee ka ọ dị mfe ịgbanye ngwa ngwa n'ime ụlọ ma gbochie ọrụ ọbụla na njikọ njikọ na wired.
High Speed: Motor max speed bụ 2500 rpm; ọnụ ụzọ max ọrụ ọsọ bụ 2 m / s.
Ezigbo: Usoro ihe eji eme ihe nwere ike idozi nsogbu ahụ na-akpaghị aka, na usoro ọsọ ọsọ ya na-agbanyeghị ọsọ ọsọ iji hụ na ọrụ dị mma.
Banyere SEJ motor na Holip controller: Mkpụrụ obi atọ na-atụgharị na-emepụta ihe dị iche iche na-arụ ọrụ nke ọma, Ọ na-adabara maka nnukwu ígwè ọrụ isi na mgbaka ọsọ enyemaka, na ọ na-eji maka dị iche iche chọrọ nkwụsị ngwa ngwa na ebe ziri ezi. Oge ngbochi n'ime 0,2 nke abụọ. Ejiri ígwè eletrik na-agbakwụnye usoro DZM kpọmkwem njide onye na-emepụta eletrikiiki ugbu a site usoro nhazi (usoro nsonye nke Y) igwe eletrik. Otu k'ụzọ nchebe nke akụkụ mpempe ọkụ bụ IP44, akụkụ nke njide bụ IP23.if bụrụ nke na-emetụta ọnọdụ ọjọọ nwere ike ime ka onye ahụ jide na IP44, mana onye ahịa ga-etinye arịrịọ pụrụ iche mgbe ọ na-enye iwu, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịmepụta otu ịmepụta nanị. Ihe osise ya dị na foto 1 na nke 2, foto 1 bụ usoro ahụ nwere aka aka. Foto 2 bụ usoro na-enweghị ntọhapụ aka.Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ iwu BE, mgbe ị ga-eme ka eriri azụ (6) jikọọ ọkpọka ike ugbu a, n'ihi na ọrụ nke ike electromagnetic, electromagnet (7) na-adọta ụyọkọ gọọmenti (5), na nchịkọta mpịakọta (24), mee ka mkpụrụedemede njide (2) pụọ na nkedo nke nkedo (5) na ọta (26) ( elekota eletriki ahụ nwere ike ịrụ ọrụ ozugbo) .Ọ bụrụ na ike elee anya, mgbe ahụ, electromagnet (7) na - efunahụ ike electromagnet, mmiri ahụ (24) na - ewepụta akara ahụ (5) na mpikota onu na njide disk (2), njide ahụ arụ ọrụ, kwụsị (ọkwọ ụgbọala) ngwa ngwa, mee ka ụgbọ ala eletrik na-atụgharị ịkwaga, maka oge nke abụọ jikọọ ọkụ ọkụ ga-emeghachi ihe edoro n'elu.
Ogige Dị Elu Ọnụ Ụzọ Mgbaba na Nchekwa Elu Ọnụ Ụzọ Ngwá Agha Ụlọ Elu Ọnụ Ahịa Servo Motor Mgbanwe-Mgbochi Mgbochi Oge Kpochie Ọnụ Ụzọ Na-eme Nchekwa